Cunto: Sida loo xakameynayo soo gudbinta Spam - Talooyinka Hagaajinta Si aad u xasuusato
Barta blog ama shabakada e-ganacsiga waa khibrad horumarineed oo abaal-marin leh oo bixisa fursado badan oo lagu horumarinayo ganacsiyada iyo abuurista fursado. Si kastaba ha ahaatee, dhowr dabiiciyiintu waxay isku dayaan inay burburiyaan shirkadaha internetka waxayna abuuraan caqabado qof kasta oo aan lahayn sabab gaar ah. Waxay rabaan in ay sameeyaan wax ka badan abuurista baqdin, iyo spammers gudbinta waa mid ka mid ah. Waa ammaan in la yiraahdo spammers iyo kambiyuutarrada gudbinta ay yihiin farshaxanada farshaxanka internetka kuwaas oo had iyo jeer raadinaya inay ka tagaan calaamadaha aan wax qorin ee internetka ah.
Haddii aad eegto koontada Google Analytics oo aad aragto kororka dadka soo gudbiya bogagga aan la garaneyn, waxaa jira fursado ah in website-kaaga la bartilmaameedsado, oo aad u baahan tahay inaad qaaddid tallaabooyin sida ugu dhakhsaha badan - vps windows buy. Boggaga internetka ee soo dira spam gudbinta waa hulfingtonpost.com, priceg.com cenoval.ru, iyo bestwebsitesawards.com. Waxay u muuqan kartaa mid caqli-gal ah, laakiin intooda badan webmasters iyo bloggers ma haystaan ​​fikrad ah in boggooda ay helaan aragti been abuur ah, badankoodu waxay ka yimaadaan goobaha aan kor ku soo sheegnay.
Nasiib wanaag, Max Bell, Maareeyaha Guusha Macaamilka ee Semt , wuxuu halkan ka bixiyaa siyaabo dhowr ah oo lagu xakameyn karo goobahaas oo uu joojiyo gaadiidka isaga oo ka xanaajinaya ganacsiyadaada internetka
Isticmaal faylka .htaccess si loola dagaallamo spam u gudbinta
Haddii goobtaada lagu martigeliyo adoo adeegsanaya shabakadga Apache, waa inaad cusboonaysiisaa..faylka htaccess. Habka ugu fiican waa in la xakameeyo feylka .htaccess si looga fogaado spamka iyo dhuunta xun. Waxaad sidoo kale u wareejin kartaa Apache oo laga yaabo inay u sahlanaato inay ku qiyaasaan
Xaaladaha badankood, spameriyeyaasha iyo qatartooda ma booqdaan website-kaaga. Xaaladahan oo kale, waa inaad xannibeysaa bokiskaas oo aad dib ugu noqotid boggooda internetka iyaga oo galinaya lambarrada gaarka ah ee koontada Google Analytics. Waxa kale oo aad abuuri kartaa shaandhooyin ku qoran astaanta Google Analytics, waxayna kaa caawinaysaa inaad hagaajiso tayada gaadiidkaaga. Nasiib wanaag, Google Analytics wuxuu bixiyaa adeegyo fara badan si loo baabi'iyo lafdhabarta macluumaadka falanqaynta iyo warbixinnada. Dhibaatada kaliya ee nidaamkaan waa in aan la adeegsan karin dhammaan shabakadaha internetka isku mar.
Manhajka Qalabka Farsamada Bot
Waxaad gacanta ku samayn kartaa qalabka feylka. Tani, waa inaad tagtaa koontada Google Analytics oo aad sameysid Foomka cusub. Xulo doorasho khaas ah oo ku dheji lambarka gaarka ah taas
Xakamaynta spamer gudbinta IP Address
Waxaad si fudud u xakameyn kartaa cinwaanada IP spam u gudbinta. Waxaan jeclahay tallaabada ah inay xakamayso baabuurta ka imaaneysa IP-ga aan qarsoodi ahayn. Waa inaad hubisaa in helitaanka spameriyada loo diidayo boggaga internetka adiga oo adeegsanaya dhaqankan
Google Analytics IP Diidmada IP
Tallaabada xigta waa in la hubiyo in aad kaydisay liiska Google-ka ee kaftanka IP-ga. Waxaa muhiim ah in la xasuusto inaadan ku qanacsaneyn natiijooyinka ugu fiican illaa intaadan ka jirin liiskan. Google Analytics ayaa bixiya fursado badan oo kala duwan si looga saaro liiska iyo xayiraya cinwaanada IP. Waxaad si sahlan u dooran kartaa oo u rakibi kartaa fiilo ku jirta boggaaga, hubinta badbaadada iyo ilaalinta dhameystiran